ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင် ကစားသမား စာရင်းမှ ချန်လှပ်ခံရပြီးနောက် ဘယ်လ်ဂျီယံ လက်ရွေးစင် ကစားသ?? - Yangon Media Group
ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင် ကစားသမား စာရင်းမှ ချန်လှပ်ခံရပြီးနောက် ဘယ်လ်ဂျီယံ လက်ရွေးစင် ကစားသ??
အီတလီ စီးရီးအေကလပ် ရိုးမားအသင်း၏ အဓိကကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူ နိုင်ဂိုလန်သည် မကြာမီကျင်းပတော့မည့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဘယ်လ်ဂျီယံ လက်ရွေးစင်အသင်းမှ ချန်လှပ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် ချက်ချင်းဆိုသလို ပင်လက်ရွေးစင်ကစားသမားအဖြစ်မှ အနားယူပြီ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနည်းပြ မာတီနက်ဇ်သည် အပြီးသတ်လူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာ၌ ရိုးမား အသင်းနှင့်အတူ ခြေစွမ်းပြကစားလျက်ရှိသည့် နိုင်ဂိုလန်အား အံ့အားသင့်ဖွယ် ချန်လှပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းနေရာတွင် လူငယ်ကစားသမားအချို့ဖြစ်သည့် ဒန်ဒိုကာ၊ ဂျာနူဇက်၊ သော်ဂန်ဟာဇက်တို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် နိုင်ဂိုလန်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်တုံ့ ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ”နိုင်ငံအသင်းအတွက် မလိုအပ်တော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ဆက်ကစားပေးဖို့ စိတ်မရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက်လဲ လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် နိုင်ငံအသင်းကို အမြဲကိုယ်စားပြု ကစားချင်ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး”ဟု နိုင်ဂိုလန်က ဆိုခဲ့သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကိုယ်စားပြုကစားခဲ့သည့် နိုင်ဂိုလန်အား အပြီးသတ်လူစာရင်းမှ ချန်လှပ်ခဲ့ခြင်းမှာ နည်းဗျူဟာပိုင်းအရဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ဂိုလန်အနေဖြင့် လက် ရွေးစင်အသင်းအတွက် အရေးပါဆုံး ကစားသမား ကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း နည်းပြ မာတီနက်ဇ်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ချင်းတွင်းမြစ်သွား ရေယာဉ်များအား ဒုက္ခပေးနေသည့် မြစ်အတွင်းမှ တစုန်း(ခေါ်) ငုတ်များ ပြည်ထောင်?
ဂျူဗင်တပ် အသင်းသို့ ငါးနှစ်စာချုပ်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန် အမ်မရီကန် အပြီးသတ် သဘောတူညီမှု ရရှိ?
LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တဲ့ တေလာဆွစ်ဖ်
အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းသော ဂုဏ်သတင်းရရှိပါက ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက် ဈေးကွက်တွင် ရန်ကုန်သည် န
နတ်မောက်-ပျော်ဘွယ် ကားလမ်းတွင် ယာဉ်တစ်စီး ကားဘီးပေါက်ကာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ တိမ်းမှောက်၊ ??
ထိုင်းနိုင်ငံမှ တရားမဝင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၁၃ ဦးအား တာချီလိတ်သို့ လာရောက်လွှြဲေ??
အမေရိကန်အစိုးရက ဂျပန်နိုင်ငံအား Aegis ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ် ရောင်းချရန် သဘောတူ